Part 1. Otu Pịa ikpochapụ ozi niile na ihe iPhone na-adịgide adịgide
Wondershare SafeEraser bụ ihe kasị mma nzuzo nchebe na ngwá ọrụ gị iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị software na ga-akwụsị n'otu n'otu data dị ka ozi, oku na ndekọ, wdg na ekwentị gị ka a dum, Wondershare SafeEraser bụ ngwá ọrụ gị. Ọ na-akwado niile data na ngwaọrụ gị site na kọntaktsị, ozi, photos, videos, ngwa ọdịnala, akaụntụ Ama, na okwuntughe ka onwe onye ndị ọzọ data echekwara na ngwaọrụ gị. Ọ kasị mma na-eji maka erasing gị iPhone na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-ere ya ma ọ bụ inye ya.
The technology eji na Wondershare SafeEraser eme ka o kwe ka kpamkpam ihichapụ onwe gị data enweghị ihe ọ bụla, ohere nke na-agbake ya. N'agbanyeghị otú ike mmadụ na-agbalị naghachi-ehichapụ data na Wondershare SafeEraser, ha agaghị na-aga nke ọma na-agbake ihe ọ bụla.
N'ụzọ kwụ ọtọ na ọrụ enyi na enyi interface
Adị n'elu ngwaọrụ gị
Ruo mgbe ebighị ebi ihichapụ ọmụma
All ọrụ data akwado ka ngwa ọdịnala, ozi, kọntaktị, video, photos, ozi akaụntụ, paswọọdụ, na ndị ọzọ
Chebe gị data mgbe niile
Foto dị Compressor nyak ọzọ ohere ma ọ bụghị na-emejọ àgwà nke photos
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ka na-adịgide adịgide doro anya iPhone
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare SafeEraser site na ịpị download bọtịnụ n'elu.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ iPhone na ẹkedori Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 3: Pịa na nhọrọ nke "Ihichapu All Data" n'etiti ndị ọzọ na isi SafeEraser window.
Nzọụkwụ 4: Ụdị 'ihichapụ' iji gosi oke na pịa 'Ihichapu Ugbu a' button na ala na-amalite.
Wondershare SafeEraser ga ugbu a na-amalite na ihichapu gị iPhone. Jide n'aka na ị na-gị iPhone jikọọ kọmputa gị ofụri usoro.
Mgbe usoro zuru ezu, ị ga-ahụ a dechara ihuenyo dị ka hụrụ na foto n'okpuru.
Part 2. Olee ikpochapụ 'ndị ọzọ' na iPhone
Ọzọ bụ a nchekwa hụrụ na ihe iPhone mgbe ọ na-jikọọ iTunes. Ọ na e dere cache data, kuki na ndị ọzọ na data gị niile ngwa. Ọ enyene ụfọdụ nchekwa na iPhone na ọrụ na-enweghị ọtụtụ nchekwa ga-mkpa ikpochapụ ya iji nweta ihe nchekwa.
Ikpochapụ ndị ọzọ na iPhone, soro n'okpuru nyere nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1: ndabere gị iPhone na iTunes.
Nzọụkwụ 2: Tọgharia gị iPhone site erasing ọdịnaya niile na ntọala site na ịga na Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Nzọụkwụ 3: Mgbe nrụpụta zuru ezu, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na weghachite ndabere na iji iTunes.
Part 3. Olee ikpochapụ Maps on iPhone
Nzọụkwụ 1: Mepee Maps ngwa si n'ụlọ ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ search mmanya n'ụlọ n'elu nke ngwa na enweta na ọkacha mmasị.
Nzọụkwụ 3: Kpatụ doro anya bọtịnụ na n'elu aka ekpe ka ikpochapụ gị map.
Part 4. Olee ikpochapụ igbe akwụkwọ ozi dị na iPhone
Igbe akwụkwọ ozi dị bụ otu nke kasị mma atụmatụ nke ihe iPhone. Ị na-enweta gị ozi ịntanetị nri gị iPhone-enweghị mkpa iji kọmputa. Mgbe ụfọdụ i nwere chọrọ ka ihichapụ ụfọdụ ozi ịntanetị ma ọ bụ ọbụna na ikpochapụ igbe akwụkwọ ozi dị n'ihi na ụfọdụ onwe onye mere.
Ikpochapụ mail igbe dị na iPhone, na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mepee Mail na ngwa na-aga gị igbe. Enweta edit na kaa niile Gburu dị ka na-agụ.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ edit nhọrọ ọzọ na enweta na mbụ email na Igbe mbata. Pịa ma jide nkwaghari button na gị isi mkpịsị aka na ala nke ihuenyo. Mgbe na-ejide nkwaghari button, uncheck email gị enyocha mbụ ma hapụ nkwaghari bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3: A nkwaghari ákwà ga-apụta ebe ị pụrụ nnukwu ịkpali gị ozi ịntanetị. Bugharịa ihe họrọ ozi ịntanetị na na ahịhịa nchekwa. Ihichapụ kpam kpam ozi ịntanetị, na-emeghe ahịhịa nchekwa na hichapụ ihe niile ndị ozi ịntanetị na ya.
Part 5. Olee ikpochapụ Kalinda on iPhone
Nzọụkwụ 1: Mepee Kalinda ngwa si n'ụlọ gị na ihuenyo.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a enweta na edit na n'elu aka ekpe nke ngwa.
Họrọ kalenda ị chọrọ ka ihichapụ na enweta 'Nhichapụ Kalinda' si na ala nke ngwa.
> Resource> ihichapu> Olee otú iji kpamkpam doro anya iPhone